Yakawedzera chikamu cheMythic Quest: Raven's Banquet pamberi pekutanga kwemwaka wechipiri | Ndinobva mac
Isu tave kuda kuona kuti anovhura sei mwaka wechipiri kubva kune yekutanga Apple TV nhevedzano + Yenhema Kutsvaga: Raven's Banquet uye Apple zvinotishamisa nazvo imwezve chitsauko iyo ichatanga pamberi peiyi kuratidzwa. Iyo yakateedzana, yakakwenenzverwa neruzhinji, inoda kutenda vese vateveri nekugamuchirwa kwakanaka kwechigadzirwa.
Apple TV + iri kugadzirira chimwe chikamu cheMythic Quest. Chikamu «Everlight» inotanga muna Kubvumbi 16 papuratifomu yekushambadzira, mushure meye yakakosha episode yenyaya dzakatepfenyurwa gore rapfuura, pasi pemusoro wekuti Quarantine. Ichi chiitiko chichatiratidza iyo Mythic Quest timu inodzoka kubasa mushure mecoronavirus denda kumabiko avo egore eEverlight. McElhenney akataura mune izvi:
Everlight chiitiko chakakosha chinotarisana nematambudziko anoshanda uye emanzwiro ekudzokera pane zvakajairwa. Akazara netariro, mufaro uye tariro yeramangwana rakajeka. Tisati tasvika mwaka wechipiri unouya, takanzwa kuti ndiyo yaive nzira kwayo (uye inguva kwayo) yekukoka vateereri kuti vadzokere munyika yeMythic Quest.
Mwaka wechipiri uchaburitswa muna Chivabvu 7 uye isu takanga takuudza kare nezvazvo. Mwaka uzere nemitambo mitsva nevatsigiri veiyi yekutanga Apple TV + nhevedzano iyo, sezvatakambotaura, yakagamuchirwa kwazvo nevateereri. Izvo hazvisi zvezvishoma, kuti uone mafambiro uye zvisirizvo zveavo vanotsigira. Mushure mekuparadzaniswa kwakapfuura nedenda iri, anenge munhu wese adzoka muhofisi izvozvi, achiedza kuvaka pakubudirira kweRaven's Banquet nekutanga nyowani yekuwedzera.
Mwaka uchange wave pamusoro misoro inotevera yeedu protagonists. Ian (Rob McElhenney) uye achangokwidziridzwa co-creative director Poppy (Charlotte Nicdao) vanorwira nhungamiro yemutambo. Zvichakadaro, CW (F. Murray Abraham) anoyananisa dzimwe nyaya dzisina kugadziriswa kubva munguva yake yakapfuura. Iwo ma testers (Ashly Burch naImani Hakim) vanozoedza kufunga kuti muganho wei wekudanana muhofisi, uye David (David Hornsby) ane rombo rakaipa nevakadzi zvakare, panguva ino naJo (Jessie Ennis) vachimusiya kuti abatsire. Brad (Danny Pudi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Kufunga Kwenhema: Raven's Banquet bhonasi episode pamberi pemwaka XNUMX kuratidzwa
MacBook isina keyboard yakapihwa patent neApple